Genital Psoriasis: Migumisiro yeChidzidzo Chitsva
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Genital Psoriasis: Migumisiro yeChidzidzo Chitsva
Chidzidzo chacho chakaratidza kuti oral Otezla 30 mg kaviri zuva nezuva yakawana kiriniki ine chirevo uye nhamba yakakosha kuvandudzwa, zvichienzaniswa ne placebo, muchikamu chekutanga cheiyo modified static Physician's Global Assessment yeGenitalia (sPGA-G) mhinduro (inotsanangurwa sesPGA-G mamakisi. yezvakajeka (0) kana zvakada kujeka (1) pamwe nekuderedzwa kwe2-poinzi kubva kune yekutanga) pavhiki 16.
Pamusoro pezvo, zvese zvekupedzisira zvekupedzisira zvakasanganawo zvine chirevo uye zvakakosha kuvandudzwa muGenital Psoriasis Itch Numerical Rating Scale (GPI-NRS) mhinduro (inotsanangurwa senge kuderedzwa kwe4-point kubva padanho rekutanga muGPI-NRS chikamu chechikamu mukati meGenital Psoriasis Symptoms. kune zvidzidzo zvine zvibodzwa zvekutanga zve ≥ 4); yakakanganiswa muviri wepamusoro nzvimbo (BSA) shanduko kubva kune yekutanga; Dermatology Life Quality Index (DLQI) shanduko kubva kune yekutanga; uye static Physician's Global Assessment (sPGA) mhinduro (inotsanangurwa se sPGA mamakisi akajeka (0) kana anenge akajeka (1) pamwe nekuderedza 2-poinzi kubva pakutanga) pavhiki 16 neOtezla versus placebo.
Mhando uye chiyero chezviitiko zvakashata zvakaonekwa muyedzo iyi zvaienderana neiyo inozivikanwa kuchengetedza mbiri yeOtezla. Zviitiko zvinonyanya kushumwa zvakashata zvakaitika mune inokwana 5% yevarwere mune chero boka rekurapa vaive manyoka, kutemwa nemusoro, kusvotwa uye nasopharyngitis.
Varwere vanopedza chikamu chechipiri-mapofu chekuedza chakaenderera mberi kana kuchinjwa kuOtezla panguva yekuwedzera kwechidzidzo uye ichabatwa kuburikidza nevhiki 32. Chidzidzo chiri kuenderera mberi uye chinorongwa kupedza muhafu yekutanga ye2022.
Tsanangudzo yemhedzisiro kubva ku16-vhiki mbiri-mapofu chikamu chekudzidza ichaendeswa kuti iratidzirwe pamusangano wekurapa unouya.
MuUS, Otezla inotenderwa kurapwa kwevarwere vakuru vane mwero kusvika kune yakanyanya plaque psoriasis vari kumirira phototherapy kana systemic therapy, varwere vakuru vane active psoriatic arthritis uye kuvarwere vakuru vane maronda emukanwa ane chekuita neBehçet's Disease. Kubva payakabvumidzwa neFDA muna 2014, Otezla yakarongerwa varwere vanopfuura mazana matanhatu nemakumi mashanu pasi rose vane mwero-kusvika-wakaoma plaque psoriasis, inoshanda psoriatic arthritis kana Behçet's Disease.